ECHIMECHI N’ALA IGBO II | Igboniile
Ichie bụ echichi a na-esi na ya egosipụta na mmadụ abụrụla ọgaranya. Tupu e chie mmadụ ichie, onye ahụ ga-achọ ka e chie ya ichie ga-aga be onye isi Ichie gwa ya na ya chọrọ ịbụ Ichie. Ọ dịziiri onye isi Ichie (na ndị otu ya) ịtụle ma onye ahụ o ruru ogo ịbụ Ichie. Ọ bụrụ na onye ahụ tozuru ịbụ Ichie, ọ ga-ewegara onye isi Ichie (ichie ) ihe ụfọdụ dịka ọkụkọ ọcha, isi ụtaba, ebule gbara agba, ọjị na ego ha ga-eji ga na nke dibịa, were chụọ aja ma a gbachaa afa iji mata ma onye ahụ o tozukwara ịbụ Ichie. A na-enwe afọ ole a na-atụ anya na onye ga-abụ Ichie ga-eru tupu e kwe ka o chie Ichie. Ụbọchị a ga-echi ichie ruo, onye a ga-echi Ichie ga-esi nri ga-ezu ọhanaeze. A na-ejikarị ụbọchị afọ maọbụ ụbọchị eke echi ichie echichi a dịka obodo ọbụla siri dowe nke ha. N’ọtụtụ ebe n’ala Igbo, ọ bụ be igwe na-achị achị ka a na-anọ echi Ichie. Ọ bụkwụazị igwe na-echi mmadụ Ichie. Ọ bụ oge a na-echi Ichie ka a na-akpọ onye na-echi Ichie aha ọ chọrọ ka e were chie ya Ichie, nke bụ oge a ga na-ekpunye ya okpu Ichie ka a ga-akpọ ya aha ahụ mbụ.
E nwere ogo Ichie abụọ, ndị bụ ogo Ichie ukwu na nke Ichie (nta). Ichie ukwu bụ onye bụkarịrị ndị Ichie ndị ọzọ agadi. Ichie ukwu anaghị adị ọtụtụ n’obodo. N’ihi ya, a na-enwe naanị otu Ichie ukwu n’otu ọnụkụ (maọbụ zone) nke nwere ihe dịka ụmụnna olenaole (village), dịka obodo si hazi ya, ma na-enwekwa otu Ichie nta n’ihe dịka otu ụmụnna maọbụ n’ụmụnna olenaole dị obere karịa na nke a na-enwe Ichie Ukwu. Ọ bụrụ na Ichie ukwu nwụọ, ọ bụ Ichie nke na-esote ya n’okenye n’ogbe ya na-anọchi anya ya dịka Ichie ukwu.
Ọ bụ oge e mechara nchọpụta niile a chọrọ maka onye chọrọ ịbụ Ichie, mgbe a gbachara afa niile e kwesiri ịgba, ma chụchaa aja niile n’ebe niile na etu niile omenala siri kwu, ka a na-echi mmadụ Ichie. Ọ bụ mgbe e mechara ihe niile ndị a ka a na-etinye ụbọchị a chọrọ ka e chie mmadụ Ichie. Ụbọchị ahụ ruo, obodo niile ga-agbakọ be Igwe na-achị obodo ka ha hụ onye a ga-echi Ichie. Igwe ga-akpọrọ onye ahụ chọrọ ịchị Ichie gaa ebe zoro ezo kọwaara ya ihe ụfọdụ ma dụọ ya ọdụ. Oge nke a mechara, onye ahụ na-apụta n’ọgbọ sekpuru ala n’ọha. Igwe ga-eji ihe ndị e ji eke ekike Ichie pụta were dokwaa onye ahụ a na-echi Ichie. Ihe ndị na-eso n’ekike ndị Ichie gụnyere ákà nke ụkwụ, ákà nke aka, ákà nke olu, okpu e tunyere abụba ugo, (abụba ugo na-egosi na onye ahụ etozuola), n’ihi na ugo gbuzuo, ọ chakee. Igwe na-enyekwa ya nkucha, ma yinyekwa ya nnukwu uwe dị ebube, ma chinye ya nke nchịnye. Mgbe nke a mechara, ndị ahụ e chiri echichi na nwunye ya ga-apụta n’ọgbọ gbaa egwu. Ya na ndị Ichie ndị ọzọ gbachaa egwu, a ga-eri ma ṅụọkwa ihe ndị ahụ e butere ebe ahụ, nke ọ ga-abụ e mechaa, a gbasaa.
Ụfọdụ n’ime ọrụ ndị Ichie gụnyere:
Inyere Igwe na-achị obodo aka n’ịhazi na ilekọta obodo.
Inye aka hụ na udo na-adị n’obodo.
O nwere okwu nwere ike ịdapụta n’obodo, igwe nwere ike inye ndị Ichie ntụziaka ka ha lebanye ya anya.
Dịka o si dị n’ọtụtụ echichi n’ala Igbo, a na-enwe iwu a na-ele anya ndị Ichie aghaghị idowe. Nke mbụ bụ iwu ndị Ichie n’onwe ha, nke abụọ bụ iwu obodo. Ọ bụrụ na onye ichie adaa iwu ọbụla n’ime iwu ndị a, a na-ata ya ahụhụ dịka iwu ọ dara si dị, na dịka obodo na otu ndị Ichie siri dowe ya.
Ọ bụrụ na a chọpụta na onye Ichie na-ada iwu, a na-agakwuru Ichie Ukwu, onye ga-enyere Ichie ahụ aka ịhụ na ọ na-eme ihe o kwesiri ime. Ma o nwere ka ihe ga-esi dị, ọ bụ Ichie Ukwu bụ onye ga-agakwuru Igwe na-achị obodo gwa ya ihe Ichie na-eme. Ọ bụkwa Igwe na-achị obodo nwere ike inye iwu ka a kụọ ekwe ka ọha gbakọọ etu ha siri gbakọọ oge e chiri onye ahụ Ichie. Ọ bụ n’oge obodo gbakọrọ ka a ga-ekpupu onye ahụ okpu, maọbụ nye ya ahụhụ ọzọ dịka ihe o mere siri dị n’ihi na a gbakọọ aka ree nwaọkpụ, ọ naghị awa n’afa.